Chii chinowirirana pakati pekuita SEO uye backlinks profile?
SEO uye backlinks dzinozivikanwa sezvinokosha zvikuru uye zvichida dzakaoma zvikuru zvikamu zvezvino zviri kubudiswa mumutambo - zvose mune imwe. Kunyange zvazvo nzira yekubatanidza chivakwa yakatorwa pane yose inowanzobatana ne-off-site Search Engine Optimization, iyi inenge yakakosha nzvimbo yakatova yakanyanya kukosha - chaizvoizvo inotyaira imwe nzvimbo yewebsite yekufambira mberi, kunyanya kuburikidza nemakore achangopfuura. Ndinoreva kuti sarudzo imwe neimwe muSeO uye backlinks inogona kuchinja pakarepo nyore nyore - kungofanana nedzimwezve zvinyorwa zvechirongwa chekushandurwa zvinowanikwa neGoogle (yeuka kushungurudzika kwakakonzerwa nePenguin. rudyi?). Kunyange zvakadaro, kune dzakawanda dzenheyo dzese dzese mukubata SEO uye kumashure kwekuzvimirira ivo pachavo kuti varambe vari parutivi rwakanaka uye vanzwe vakachengeteka - kunyange kudarika-kushanduka kwechokwadi kutonga pamusoro penyika iyo yakakura uye yakazara ye SEO.
Ndinoreva kuti pane mitemo yakasiyana-siyana inonyatsoshandurwa mumitemo iyi yakashata yemutambo. Uye pane kuwirirana zvakajeka pakati pehuwandu hwekushanda muSeO uye backlinks purogiramu yako pane webhusaiti yako kana blog. Rega ndikupe humwe hutsotsi hunoratidza kuti, pamwe nemazano akawanda anoshanda ayo achavimba kuti achakubatsira kusarudza nzira dzakarurama dzevari vaviri - nokuti ndinotenda kuti SEO uye backlinks zvinongoita zvinganzwisisika kana zvichisanganiswa pamwe chete.
Zviratidzo zvitatu zveEx Main Link yeSeO - Mumaziso eGoogle
1. Anchor Text ingangodaro chiratidzo chakasimba zvikuru chaungashandisa kutungamira uye ugare kunze kwemakwikwi.
2. Social Sharing haisi iyo yakagadziriswa, asi ichiri chinyatsoenzaniswa uye chinowanzogara kwenguva refu inofungidzirwa nenjini dzinotsvaga.
3. Nyaya-Nyanzvi chaiyo kana inyanzvi-yakakosha unhu ndiyo yekupedzisira inokosha ye SEO uye backlinks inotumirwa zvakananga nevashandi vari kurarama uye yakapararira mukati memharaunda inofarira uye inotengeswa pamisika.
Mufananidzo wakazara weSeO neArelinks - Mazano anoshanda uye mazano
Itai zvinhu zvakasiyana uye zvinokosha zvinopa kukosha kwakakodzera kumushandi - uye iwe webhusaiti yako kana bhulogi zvakakodzera zvakakodzera zvakakonzera kumashure zvakakosha nevane simba guru uye PageRank scores. Zvechokwadi, inguva inopedza nguva uye yakajeka basa rakaoma, asi nokuda kwekupararira kwekubatana kwekugadzirisa iwe uchagara uine hukuru hunokosha hunoenderana nekunyoresa kwako. Mushure mezvose, nei chirevo chako chevateereri chichifanira kubatana newebsite yako kana blog? Hazvirevi kuti inonyanya kukoshesa indasitiri kana niche dzinokurudzira vanhu kana kuti mabhogi ekutanga - iwe unogara uchigara mune zvakanakisisa.
Mushanyi akatumira kuti awane zvakakosha backlinks neDoFollow chimiro ndiyo chaiyo iyo yezvibatanidzwa izvo chaizvoizvo zvinoshanda zveSeO zvinangwa. Chii chinowedzera - chinogona kukupa pachena zvakanyanya pakutsvaga kwepaIndaneti, zvichipa kuti iwe unopa chinhu chinokosha chaizvo kana bhokisi rehuwandu iro raizoparadzirwa paSocial Media - zvichiita kuti uwane zvikamu zvizhinji, zvinotungamirira, kutaura, kubhadhara, uye zvechokwadi zvakachengeteka zvakasikwa kudzokera shure mune imwe nzira inenge inotungamirirwa.
Zvakagadziriswa kumashure zvinofanirwa kushandiswa kuti zvive nekufambisa kwakanakisisa munzvimbo yese yewebsite, kana kubatanidza juisi (a. k. a. PR uye trust distribution) zvinangwa chete. Ndiri kureva pano kuti avo vanonzi backlinks vanokonzerwa ne blog blog, vahedheni mazita kana mapepa emasaini vanowanzotaridzirwa neongororo huru yekutsvaga, zvechokwadi kana yaitwa pasina kunzwisisa zvakajeka. Ngatitarisei - rudzi urwu rwekubatanidza runogona kunge rwakatomiswa zvakare. Zvinosuruvarisa, vanhu vakawanda vanori kuedza kuisa hutsinye mapeji avo nehuwandu hwakawanda hwakasikwa huripo hwepamusoro - zvichida nekuda kwekuwedzera SEO yavo. Mukati, zvisinei, izvo zvakashata-hutano hwehutano nezvimwe zviito zvekunyatsopisa zvinotarisa zvichagara zvichitarisa spammy kana zvinyengeri kubva mumaonero eGoogle, nokudaro zvinoshandisa zvikwereti zvakanyanya zvekukodzera Source .